Bonhams London Jewel အရောင်း - ရလဒ်များ HIGH ရတနာအိပ်မက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2019
Cartier မှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် Art Deco Aquamarine နှင့် Diamond လည်ဆွဲသည်အဓိကဆွဲဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ရောင်းချခြင်း လန်ဒန်မှာ။
Bonhams London - Cartier မှ Art Deco ငါးမွေးမြူရေးနှင့်စိန်လည်ဆွဲ။ ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်ခန့်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ဂျီ ometric မေတြီဒီဇိုင်း၏မြင့်မားစွာတင်သည့်ကော်လာ၊ အလယ်ဗဟိုမှအရွယ်အစားအတိုင်းအတာဖြင့်ဘွဲ့ရရှိထားပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောငါးပုစွန်များနှင့်အစိမ်းရောင်ဖြတ်ထားသောစိန်လက်ရာများရှိသည်။ ပလက်တီနမ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်စတုဂံပုံဖြတ်ထားသောငါးမျှားသည့်ကိန်းဂဏန်းများမှဆိုင်းငံ့ထားသောတောက်ပသောဖြတ်တောက်ထားသောစိန်အသံထွက်များနှင့်အတူ motif မီးမောင်းထိုးပြမှုများ၊ အလယ်အလတ်ဒိုင်းပုံစံပုံသဏ္frontာန်သည်ပြတ်တောက်သွားနိုင်သည်။ စုစုပေါင်းစည်ပေါင်း ၁၆၉.၈၅ ကာရက်ရှိပြီးစိန်ပေါင်း ၉.၆၄ ကာရက်၊ Cartier London တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရက်စွဲခဲ့သော Cartier Art Deco Aquamarine နှင့် Diamond လည်ဆွဲသည်ပေါင် ၄၅၉,၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်ထက်သုံးဆပိုများသည်။
လည်ဆွဲသည်အလွန်ပီသပြီးပထ ၀ ီအနေအထားအရဖြစ်သည်။ ကာရက် ၁၇၀ ကာရက်ရှိသောကိုက်ညီသောငါးပုစွန်များတပ်ဆင်ထားသည်။ ဤရတနာသည် Cartier ၏နှောင်းပိုင်းအနုပညာ Deco စတိုင်၏အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်ပြင်သစ်ရတနာသည်နိုင်ငံတကာတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးရောင်းချမှုအတွင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေလံပွဲကိုစတင်ခဲ့သည်။
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်မှစ။ Cartier သည်၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းများတွင်ငါးမွေးကန်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီလည်ဆွဲဟာ Maison ဟာပွင့်လင်းတဲ့အပြာရင့်ကျောက်မျက်ရတနာကိုခေတ်မီမြင့်ရတနာဒီဇိုင်း၏ရှေ့တန်းမှတိုးမြှင့်ပုံကိုခမ်းနားထည်ဝါစွာဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမ်မလီဘာဘာ, Bonhams ဗြိတိန်ရတနာညွှန်ကြားရေးမှူး
အရောင်းအဝယ်ကာလအတွင်းစိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်သောအခြားအရာများမှာနာရီ ၂၃ စုစုစည်းထားသည့်အရေးပါသောစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၂ ခုမှာ Cartier မှဖြစ်ပြီး Art Deco ခေတ်မှဖြစ်သည်။
ဤနာရီများကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေသည်မှာ၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးသည် ၁၉၀၈ မှ Art Deco (ထို့ကြောင့် ၁၉၂၀) အထိကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည် Cartier သည်ထိုအချိန်ကဆက်စပ်ခဲ့သောဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ ကြော့ရှင်းမှုနှင့်လက်မှုလက်ရာတို့တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ 'လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနာရီ' နည်းပညာသည်ပြင်သစ်လက်ဝတ်ရတနာများ၏နာရီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကားဖန်တီးမှု Maison နှင့်အလှဆင်အနုပညာနှစ် ဦး စလုံး၏သမိုင်းအတွက်နည်းပညာနှင့်ဗေဒခရီးစဉ် de force ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဖော်ပြသည့်အတိုင်းဤ“ အံ့ of ဖွယ်အံ့ဖွယ်ရာများ” Gazette du Bon Ton ၁၉၂၅ တွင် Louis Cartier နှင့် Maison ၏လက်ပတ်နာရီ Maurice Coüetတို့၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည် illusionist Jean-Eugène Robert-Houdin ၏လက်ရာဖြင့်လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရသည်။ ပထမဆုံးမော်ဒယ်ကို ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး Maison ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနာရီ၏ထုတ်လုပ်မှုသည်ယနေ့အထိဆက်လက်တည်ရှိသည်။
Bonhams London - ၁၉၁၉ Cartier မှ Art Deco ရော့ခ်ကျောက်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြွေနှင့်စိန် - 'Mystery Clock'၊ ပေါင် ၆၀၃၀၆၂ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
ထောင့်မှန်ကျောက်တုံးကျောက်တုံးနှင့်ဗုံးဘက်နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်ဘေးပတ်ပတ်လည်ရှိအရှိန်မြှင့်ထားသောခြေထောက်များ၊ နှစ်ဖက်စလုံးအဖြူရောင်ကြွေပြားဘောင်ကိုရွှေချယ်ရွက်အလှဆင်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုထားသောရောမနံပါတ်များနှင့်အတူနှစ်ပတ်လည်အခန်း၏လက်စွပ်ကိုစတီယာရင်အတွင်းပိုင်းသို့ဆွဲဆောင်သည်။ နှင်းဆီပန်းစိန်နှင့်ရွှေပုတီးစေ့များပါ ၀ င်သည့် Agate အခြေစိုက်စခန်းတွင်နှင်းဆီပန်းစိန်လက်များနှင့် \_ t နောက်တစ်ခုကိုအစားထိုး, အခြေစိုက်စခန်းနှင့်လှုပ်ရှားမှု pediment Cartier လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်.
အရေးကြီးသောသက်သေပြမှုသည်စုဆောင်းသူများအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားကြောင်းသက်သေပြသည်
ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့သက်သေပြနှင့်အတူလာသောအခါရတနာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လာသည်တကယ်တော့တစ် ဦး ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအထောက်အထားများ၏စုဆောင်းမှုထဲကနေရတနာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Vita Sackville အဘိဓါန် West Pre- ရောင်းချမှုခန့်မှန်းချက်များနှင့်ထံမှရတနာထက်ကျော်လွန် ဘာဘရာတေလာဘရက်ဖို့ဒ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့အားလုံးရောင်းစားခံခဲ့ရသည်။
Bonhams London - Art Deco သည် ၁၉၁၂ Cartier မှမြ၊ မြ၊ ကျောက်ဆောင်နှင့်စိန်ဆွဲကြိုးတို့ကိုထွင်းထုထားသည်။ ပေါင် ၁၀၂,၅၆၂ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ကြီးမားသော cushion-shaped မြတက်ဘလက် (အက်), ရှေ့ပန်းနှင့်အိန္ဒိယပန်း motifs နှင့်အတူ, အက္ခရာတင်ကျောက်ဆောင်ကြည်လင်၏ဘောင်အတွင်း, ဆင်တူအရသာအတွက်ထွင်း, ထွင်းကျောက်နှင့်အားဖြင့်ကျော်လွှား, တူညီတဲ့အရသာအတွက်ထွင်း, ထွင်းကျောက်တံတား ကျောက်စရစ်နှင့်စိန်ပွင့်နှစ်ပွင့်ဖြင့်အလှဆင်ထားသောနှင်းဆီကြိုးရှည်ရှည်အနက်ရောင်ကြိုးဆွဲကြိုးနှင့်ပန်းခတ်ပုံပန်းသုတ်ထားသည့်ဆလိုက်များ၊ ပန်းနှင့်အချိုမှုန့်အလှဆင်ခြင်းနှင့်နှင်းဆီဖြတ်စိန်ပွင့်များ။
၉၉ ကာရက်ရှိ Mughal မြကြီးသည်မြ တက်ဘလက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထွင်းထုထားပြီးစိန်များဖြင့်အလှဆင်ထားသောကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကျောက်သလင်းကျောက်သလင်းကွင်း၌တပ်ထားသည်။ ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော Maharajah ပုံစံသည် Cartier ၏ကျော်ကြားသောရတနာများကိုအလွန်ရှားပါးပြီးအစောပိုင်းကဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် Harold Nicholson နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုပြုပြီး Lady Sackville မှသူမ၏သမီး Vita Sackville-West ကိုရောင်းချခဲ့သည်။
အဆိုပါရတနာသည် Sackville မိသားစုတွင်အနှစ် ၁၀၀ ကျော်ကြာခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်းမတွေ့ရတော့ပေ။ Vita Sackville-West ၏မြေး Vanessa Nicholson ကဤသို့ရှင်းပြသည် - “ အဖွားကဝတ်စားဆင်ယင်တာ၊ ဘောလုံးကစားတာကိုနှစ်သက်တယ်။ သူမမသေဆုံးမီ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်ဗီတာသည်အမေကိုသူမ၏ရတနာအချို့ကိုပေးခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်သူတို့ကိုဘဏ်တစ်ခုမှာသိမ်းထားခဲ့ပြီးဒီအလင်းရောင်ပြန်ရောက်လာတဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရတနာတစ်မျိုးလို့ငါထင်နေတယ်။ ”
Bonhams မှပေးသောရတနာများနှင့်ဘာဘရာတေလာဘရက်ဖို့ဒ OBE ၏စုဆောင်းမှုမှရရှိသောရတနာများသည်သူ၏ ၅၅ နှစ်တာကာလအတွင်းဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူဘော့ဘရက်ဖို့ဒနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဤအတွက်၊ ထိုရတနာများသည်မြင့်မားသောစိတ်ဓါတ်များတန်ဖိုးရှိသည်။
Bonhams လန်ဒန်။ တစ် ဦး ကဖန်စီအရောင်စိန်နှင့်စိန်လက်စွပ်
Demi-lune စိန်ပခုံးများအကြားအဝါရောင်တောက်ပသည့် ၁၁.၃၀ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသောဖြတ်တောက်ထားသောစိန်။ £ 11.30 ရောင်းချခဲ့သည်။
“ နေထဲမှာနေဖို့ Bob ရဲ့အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုကတော့အီတလီက Capri ပါ။ သူသည်အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်၎င်းရတနာရတနာဆိုင်များကိုကြိုက်ခဲ့သည်။ သူအကြိုက်ဆုံးကတော့ AlbertoeLina လို့ခေါ်တဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုင်လေး။ Bob ၏အဆိုအရသူတို့သည်အကောင်းဆုံးလက်ဝတ်ရတနာများနှင့်နာရီများစုဆောင်းခြင်းကိုအမှန်တကယ်ရရှိခဲ့ကြသည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုစိန်အိတ်များဖြင့်ခြုံထားသော ၁၁.၃၀ ကာရက်အဝါရောင်စိန်လက်စွပ်ကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်မမသိဘဲဝယ်ရန်လျှို့ဝှက်စွာသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နေ့လည်စာစားချိန်မတိုင်မီသူသည်ကျွန်ုပ်လက်ကိုကိုင်။ နမ်းလိုက်ပြီးသူ၏အိတ်ကပ်ထဲမှထုတ်ယူခဲ့သောလက်စွပ်ပေါ်တွင်ချော်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာတောက်ပနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျွန်မအံ့သြတကြီးနဲ့အသံထွက်နေခဲ့တယ်။ ငါထရပ်ပြီးသူ့ပါးကိုနမ်းလိုက်တာက "ဒါဟာတကယ့် Bobby Dazzler!" Bob ကသူ၏ပြုံးရွှင်သောအပြုံးဖြင့်ပြုံးပြီး“ မင်းငါလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်ငါအရမ်းပျော်တယ်။ ငါလက်စွပ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာဝတ်ဆင်ခဲ့ပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်မရဲ့ sapphire စေ့စပ်လက်စွပ်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်။ စိန်တစ်ပွင့်ဟာအန္တရာယ်ကင်းစွာထိုင်ဖို့အရမ်းကောင်းတယ်၊ တခြားသူတစ်ယောက်ကိုငါလိုပဲပျော်မွေ့စေချင်တယ်။ ”
ဤအံ့ဖွယ်ရတနာပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်နှစ်များတစ်လျှောက်ဝတ်ဆင်။ ပျော်မွေ့စွာခံစားထိုက်သည်။ ပိုင်ရှင်အသစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောဘော့လုပ်သလိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Tags:လလေံပှဲ • လေလံရလဒ် • Bonhams • ရောင်းချခြင်း
မှတ်ချက်0ခုBonhams London Jewels အရောင်း - ရလဒ်"